Lumanu: Chọọ ndị na-emetụta ya ma chọpụta ọdịnaya dị na ya | Martech Zone
Gbatị iru ọdịnaya gị dị oke mkpa. Ma ị na-anwa ime ka ogo gị dị elu site na ịdebanye ọdịnaya gị ma jikọta ya na saịtị ndị nwere ikike dị elu, ma ị na-anwa ịgbasa mmekọrịta gị na ndị na-ege ntị dị mkpa, ma ọ bụ na ị na-anwa iwulite ikike na ụlọ ọrụ gị site na ịkpọ aha onye mmetụta of influencer ahịa bụ ihe achọrọ.
A na-agbawa ndị na-eme ihe n'ụzọ dị mkpa n'ime ihe abụọ dị mkpa
Ole ndị bụ ndị na-egbu egbu nke nwere ohere ịnweta nnukwu, ndị na-ege ntị na-ege ntị nke ị na-agbalị ịnweta n'ihu?
Kedu ihe bụ ihe pụrụ iche na ozi content nke ahụ ga-adọta uche nke ndị mmetụta?
Omume kachasị mma maka iji influencers maka ọnọdụ dị iche iche
Uru nke influencer yiri usoro nkesa mgbasa ozi. Ndị na-eme ihe dị iche iche ga-adị mma maka ahịa na ebumnuche azụmahịa dị iche iche. N'okpuru bụ ebumnuche ole na ole anyị zutere na ụfọdụ omume kachasị mma iji jiri ndị na-eme ihe ziri ezi
Mmekọrịta ọhaneze - mkpụmkpụ ego nke ụlọ ọrụ PR dị oke ọnụ, na-eji Lumanu amata ndị nta akụkọ na ndị na-ede blọgụ bụ ndị ọkachamara n'ịtụle akụkọ gbasara isiokwu gị dị oke mkpa maka ịkwọ ụgbọala n'okporo ụzọ dị mkpa (dịka, njirimara ngwaahịa ọhụrụ, usoro ego, wdg). Site na ichoputa ndi oru nta akuko na ijikwa ozi, ulo oru gha achoputa nmekorita a ma nyefee ya n'aka ulo oru PR. Nke a ga-aba oke uru na ogologo oge n'ihi na ha ga-enwe ike ide banyere atụmatụ / ọkwa mgbakwunye
Ngwaahịa na Nzaghachi Njirimara - Ndị na - emetụta ya bụ ndị ọkachamara ma nwee ntụkwasị obi nke ndị na - ege ha ntị, na nghọta miri emi banyere oghere ha na - ekpuchi. Ha na-eme mbadamba ụda na-ada ụda maka ngwaahịa ọhụrụ, atụmatụ, ma ọ bụ ọbụna mgbanwe-na-ntụziaka nke ngwaahịa ndị dị. Anyị ahụla ụdị ndị buru ibu na-eji ndị na-eme ihe mgbe ha na-aghọta uru na ọghọm nke ịbanye oghere ọhụrụ. Ndị na-eme ihe ike na-enwekarị ịnụ ọkụ n'obi mgbe enyere ha ohere ịnye nzaghachi maka ngwaahịa ma ọ bụ onyinye ọhụrụ.
Mmepụta Ihe - veragba ụgwọ onye na-eme ihe ike iji mepụta ọdịnaya maka akara gị nwere uru agbakwunyere nke iwuru ya na ndị na-ege ntị nwere ike ịkwalite ọdịnaya ahụ. Ma ọ bụ nkuzi nkuzi ma ọ bụ nyocha asọmpi, itinye mgbali maka ihe okike na-ekwe nkwa na ọdịnaya gị ga-adị oke mma yana ndị ziri ezi hụrụ ya. Ihe ị ga - eme bụ ịchọta ọ bụghị naanị onye na - emetụta ihe dị mkpa, kamakwa onye nwere akụkọ ihe mere eme nke ịmepụta ụdị ọdịnaya dị mma ị na - achọ ịmepụta.
Mmepụta Mbufo - Site na ịnọ na nyocha nke influencer, akara ga - eme ka olu ha nwekwuo oke. Anyị ahụla ụzọ kachasị mma iji wulite ntụkwasị obi maka akara gị ma jigide ya bụ ịdị na-ebute ụzọ mgbe niile nke ndị na-ege gị ntị. O nweghi ihe o mere ma ọ bụrụ na ndị na-ege ntị juputara na CTO ma ọ bụ nne gị nọ n’ụlọ, igosipụta ụdị ahịa. Ndị na - emetụta ya chọrọ ka ha mepụta ọdịnaya, ma ọ bụrụ na ịnwere ike inyere ha aka site na data na - atọ ụtọ ma ọ bụ nkwupụta ozi - ọ ga - enyere gị aka ịbịakwute ọtụtụ mmadụ.
Lumanu bụ nke izizi na naanị ikpo okwu iji wulie mmetụta ntanetị na grafoto ọdịnaya maka onye ọrụ ọ bụla, maka isiokwu ọ bụla. Nke a pụtara nsonaazụ dị oke mkpa nke ga-aka mma karịa oge. Ebumnuche ha bụ iwepụta usoro ntinye okwu nke akara ma mepụta ndị kacha mma na dijitalụ na mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ma mee ka mmekọrịta na mmekọrịta mmekọrịta dị ka esemokwu dị ka o kwere mee.
Lumanu na-ewunye eserese influencer oge na-adabere na isiokwu enyere. Dabere na usoro ntanetịime anyị, ị na-ekwe nkwa ndepụta nke ndị nrụrụ ahaziri maka isiokwu gị - nke na-akawanye mma ma dị omimi karịa oge.
Ndị na-emetụta ya, mmekọrịta mmadụ na ibe ya, yana ọdịnaya ha kacha dị mkpa bụ ịpị aka. Ejiri usoro kachasị mma nke ile anya Influencer rụọ usoro ikpo okwu dị ka nchịkọta nke ọdịnaya + ọdịnaya ha, ọ bụghị naanị na Twitter bio. Nke a na-enye ohere maka izipu ahaziri iche nke ọma egosila na ọ ga-arụ ọrụ okpukpu abụọ karịa ịbịaru oyi.
Algọridim ọnọdụ steeti nka (NLP) algọridim na-ewepụta isiokwu sitere na ọdịnaya ama ama maka isiokwu gị iji nye echiche nke ihe ndị mmadụ na-eme. CPC na ad mpi data na-enye ihe ngosi nke etu okporo ụzọ si baa uru (asọmpi CPC & Ad dị elu pụtara na ndị na-emetụta ya na oghere ahụ bara uru ebe ọ bụ na ndị na-ege ntị nwere mmasị na isiokwu ndị a bụ ndị ahịa bara uru).
Ndị ụlọ ọrụ nha dị iche iche na-erite uru site na ọ bụghị naanị ịchọpụta ndị nwere mmetụta dị mkpa kamakwa itinye aka na-aga n'ihu iji mepụta nsonaazụ azụmaahịa n'ezie.
Gbalịa Lumanu n'efu
Tags: mmepụta iheidoziọdịnaya ziri ezichọpụta ọdịnayachọta ndị na-eme ihemmetụtammetụta ahịanchọpụta influencereserese impencermmekọrịta ọhaneze